कोरोना भाइरसको असरले शिवम् सिमेन्टको नाफा घट्यो
वैशाख ३१, काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टको चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा नाफा घटेको छ ।
बुधवार प्रकाशित उक्त कम्पनीको त्रैमासिक विवरण अनुसार गत वर्ष सोहि अवधिको तुलनामा यस वर्ष नाफा घटेको हो । गत वर्ष रू. १ अर्ब ५ करोड ८९ लाखभन्दा बढी खुद नाफा गरेको उक्त कम्पनीले यस वर्ष रू. ७९ करोड २४ लाखभन्दा बढी मात्र खुद नाफा गरेको हो ।
गत वर्षभन्दा यस वर्ष उक्त कम्पनीको खुद नाफा २५ दशमलव १७ प्रतिशत कम भएको हो । गत वर्ष यस अवधिसम्म रू. ८ अर्ब ३७ करोड ६१ लाखभन्दा बढी सञ्चालन आम्दानी गरेको उक्त कम्पनीले यस वर्ष सोहि अवधिसम्म रू. ७ अर्ब ८ करोड ४० लाखभन्दा बढी मात्र गरेको छ ।
गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी १५ दशमलव ४३ प्रतिशत घटेको छ । हाल जारी लकडाउनका कारण उद्योग नियमित सञ्चालन हुन नसक्दा उत्पादन तथा विक्री वितरणमा असर परेकाले सञ्चालन आम्दानी घटेको उक्त कम्पनीले बताएको छ ।
हाल उक्त कम्पनीको चुक्तापूँजी रू.४ अर्ब ४० करोड छ । शेयर प्रिमियममा रू. ९४ करोड २ लाख रहेको उक्त कम्पनीको जगेडा कोषमा रू. ३ अर्ब ३४ करोड १ लाख रहेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक रू. २४ दशमलव एक रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १९७ दशमलव २८ रहेको छ ।